Huawei P30 Pro, ihe ngosi mbụ na njedebe dị elu na mbugharị ọzọ | Gam akporosis
Huawei P30 Pro, ihe ngosi mbụ nke njedebe dị elu na mbugharị ọzọ
Michael Hernandez | | Noticias, Nyocha
Taa ụdị ọhụrụ abụọ dị elu nke Huawei, P30 na P30 Pro. Ngwaọrụ ndị a bụ nke kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ China chọrọ ịnọgide na-eme ka o doo anya na ọ bụ ebe a ka ya na ndị kachasị mma na-ere ahịa, na-ahapụ Huawei Mate 20 Pro na ọkwa nke katalọgụ ya.
Anyị nwere ọhụrụ Huawei P30 Pro na anyị ga-agwa gị ihe mbụ anyị chere kemgbe na-anwale ngwaọrụ a dị egwu. Nọnyere anyị ma chọpụta ihe niile anyị ga-agwa gị gbasara Huawei P30 Pro ọhụrụ.
Dị ka ọ dị na mbụ, taa anyị na-ezukọ ebe a kọntaktị mbụ nke ngwaọrụ ahụ, mkpebi mbu m banyere izi ezi ma ọ bụ na enweghị njirimara ya yana arụmọrụ nke ọ nyela m mgbe awa izizi jiri. Agbanyeghị, dịka oge niile, anyị ga-enye gị nyocha miri emi yana ule nke igwefoto ha n'ime izu ole na ole, yabụ na ị gaghị echefu ụzọ Gam akporosis na ọwa anyị YouTube, ebe anyị ga-eme ka ị mụrụ anya maka ihe niile. Yabụ, nọnyere anyị ma chọpụta ihe mbụ bụ Huawei P30 Pro hapụrụ anyị.
1 Akụrụngwa na imewe, ile anya mbụ
2 Nnukwu ngwaike na nnukwu ihuenyo
3 Akụkọ nke Huawei P30 Pro na ndị ọzọ anọghị
4 Igwefoto kachasị mma na batrị kachasị mma n'ahịa?
Akụrụngwa na imewe, ile anya mbụ
N'oge a, Huawei ahapụghị anyị ohere buru ibu n'echiche, ọ tinyela atụmatụ yiri nke Huawei Mate 20, ọkachasị n'ihu, ebe ọ bụ na O doro anya na echichi nke nkuanya na-enye anyị a «dobe» na n'ụzọ ziri ezi eche nanị na nke ahụ gwụsịrị ịhapụ usoro "amị n'ọnwa" nke ọhụụ ọhụrụ nke Samsung Galaxy dị ugbu a na nke ahụ dị na ụfọdụ njedebe nke Huawei n'onwe ya. Bụrụ na ọ nwere ike, nke a bụ nhọrọ onwe onye, ​​ma ọ bụrụ na enyere m nhọrọ, m dị ka gout karịa "notch" na "amị n'ọnwa". Oge a Huawei ejirila iko na-emegharị ọnụ n'akụkụ nke na-eme ka ọ dị mma.
Size: X x 158 73 8,4 mm
Ibu ibu: 192 grams
Na azụ anyị nwere iko nyere agba anọ: Black; Red, Twilight na Ice White. Nnukwu ihe ịga nke ọma na agba nke Huawei P30 Pro nke na-enweghị mgbagha dị anya na-agaghị ahụ ya. Otú ọ dị, ndokwa nke atọ ese foto Ọ dị ezigbo iche na nke anyị nwere na mpaghara di na nwunye na "square" ahụ. Ugbu a, anyị nwere ndokwa dị ogologo na nke ahụ niile na-echetara anyị ihe atụ nke Xiaomi Mi 9. Banyere àgwà nke ihe ndị ahụ, ọnụ ya dị ka nkasi obi dịka enwere ike ịtụ anya ya.
Nnukwu ngwaike na nnukwu ihuenyo
Nka na ụzụ nkọwa Huawei P30 Pro
Nlereanya P30 Pro
Usoro njikwa Achịcha 9.0 Android na EMUI 9.1 dị ka oyi akwa
Ihuenyo 6.47-inch OLED nwere mkpebi Full HD + nke pikselụ 2.340 x 1.080 na 19.5: nha 9
Nhazi Kirin 980
Nchekwa n'ime 128/256/512 GB (Gbasaa na microSD)
Igwefoto na-aga n'ihu 40 MP nwere oghere f / 1.6 + 20 MP obosara 120º nwere oghere f / 2.2 + 8 MP nwere oghere f / 3.4 + Huawei Sensor TOF
Igwe n'ihu 32 MP nwere oghere f / 2.0
Njikọ Dolby Atmos Bluetooth 5.0 jack 3.5 mm USB-C WiFi 802.11 a / c GPS GLONASS IP68
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka ihe mmetụta wuru na ihuenyo NFC Face Kpọghe
Batrị 4.200 mAh na SuperCharge 40W
Akụkụ X x 158 73 8.4 mm
Ibu ibu 139 grams
Ahịa 949 euro
Anyị achọtala na Huawei P30 ụfọdụ njirimara teknụzụ nke na-anaghị ahapụ anyị enweghị mmasị mana nke ahụ anaghị ewepụ anyị oke na mpaghara nkasi obi. Ọ bụ ezie na anyị na-asị ezigbo mma ihu ihu, Huawei na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ntanetị aka nyocha ihu nke na-enye nsonaazụ ọma dị na Huawei Mate 20 Pro, dị ka ọ dị na nhazi HiSilicon Kirin 980, nke ụlọ ọrụ China jiri Huawei Mate 20 mee ihe.
Na nke a anyị na-amalite na a Ngosipụta OLED nke anyị na-amaghị na emeputa ma, nakwa dị ka mmiri na-eguzogide ya na Asambodo IP68. Na nchekwa na ọkwa RAM anyị nwere ezigbo anụ ọhịa, 8 GB Ram na 128/256/512 GB nke nchekwa na a ga-agbasawanye ha site na sistemụ Kaadị ebe nchekwa Huawei Nano nke a katọrọ mana ụlọ ọrụ China na-ekwusi ike na ịgbasa, ọ ga-emecha nweta ya? A ka ga-ahụ ya. Na larịị ngwanrọ, ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ na nke kachasị ọhụrụ Achịcha 9 Android na EMUI 9 oyi akwa nhazi, otu n'ime ndị kasị hụrụ n'anya site na ndị ọrụ ya ma nke a na-agụpụ na arụmọrụ.
Akụkọ nke Huawei P30 Pro na ndị ọzọ anọghị
Ihe mbụ anyị kwuru na Huawei P30 Pro bụ nke ọma njikọ njikọ ekweisi 3,5mm, ihe Huawei P20 Pro nwere, mana Huawei achọghị ịlụ ọgụ megide ikpochapụ ọdụ ụgbọ mmiri a. Maka ya anyị nwere otu ọdụ ụgbọ mmiri USB C 3.1, anyị enweghị jaak 3,5mm. Ya mere, anyị hụrụ ngbanwe sitere n'okike nke Huawei P20 Pro, na-eji ihu ọma nke "dobe" arụnyere n'ihu nke Huawei Mate 20 na ndị ọrụ nwere mmasị nke ukwuu maka iji ihuenyo ahụ wee jiri ya mee ihe. ihuenyo n'akụkụ.
Maka akụkụ ya, anyị nwere atụmatụ ole na ole ọhụrụ na ọkwa nke mgbakwunye anụ ahụ, ihuenyo 6,47-anụ ọhịa OLED na Full HD + mkpebi (2340 x 1080 pikselụ), Ọtụtụ ka a nụworo na Huawei nwere ike iwepụta LG na imepụta ogwe ndị a, eziokwu ahụ bụ na ha dị ka ndị Samsung nyere na ọdụ ndị ọzọ dịka iPhone, agbanyeghị, anyị amabeghị ozi ziri ezi na nke a dọkpụrụ. Ebe anyị ga-ahụkwu ego bụ kpomkwem na igwefoto, nke kwesịrị ya ngalaba na isiokwu a na mbụ echiche.
Igwefoto kachasị mma na batrị kachasị mma n'ahịa?
Huawei P30 Pro na-enye anyị igwefoto mejupụtara modul nke ihe mmetụta ọdịnala atọ na ihe mmetụta ToF Nke ahụ na-abịa mechie igwefoto ahụ mara mma nke Huawei Mate 20 Pro nyegoro ọnwa ole na ole gara aga. Otu n'ime ihe ndị ama ama bụ 10x Zoom na iji sistemụ elekwasị anya na laser. nke ahụ ga - eweta ezigbo nsonaazụ n'ọnọdụ niile. Ihe ndị a bụ njirimara anyị ga-ahụ na igwefoto Huawei P30 Pro.
Ultra wide n'akuku, 20 MP na f / 2,2
Igwefoto isi, 40 MP na f / 1,6
Mbugharị ngwugwu 10x (5x optical na 5x digital), 8 MP na f / 3,4
ToF ihe mmetụta
Anyị na-ahapụ gị ndepụta nke foto ngwa ngwa na anyị enweela ike iwepụta ọnụ, nke na-enyekwa a Igwefoto 32 MP n'ihu f / 2.0 oghere nwere ike inye ezigbo akara eserese mara mma ma dịkwa mma maka ndị hụrụ onwe ha n'anya.
Ihe osise abalị
Ka ọ dịgodị, n'ime ya, ọ dịkarịa ala batrị 4.200 mAh, N'iburu n'uche nsonaazụ dị mma nke Huawei Mate 20 Pro nyere, ọ na-esiri anyị ike ịghara ikwenye na anyị ga-akpọ isi ala n'ihu ihe nwere ike ịbụ nnwere onwe kachasị mma n'ahịa ekwentị mkpanaka, anyị ga-anwale ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Huawei P30 Pro, ihe ngosi mbụ nke njedebe dị elu na mbugharị ọzọ
Ihe ọhụrụ beta beta na-ezo nhọrọ iji meghee ngwa site na mkpisi aka
DxOMark na-enye akara kachasị na Huawei P30 Pro